Chelsea oo soo tiigsatay kaalinta 3-aad +SAWIRRO+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Chelsea oo soo tiigsatay kaalinta 3-aad +SAWIRRO+VIDEO
Kooxda Chelsea ayaa guul 3-0 ka gaartay dhigeeda Kooxda Watford iyaga oona soo tiigsaday booska 3-aad ee kala sareenta horyaalka.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u xiiso badan waxaana lagu kala nastay bar-baro gool la’an ah xili labada dhinacba ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan.
Kooxda Chelsea oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa la timid labo fursadood oo gool loo filan karay qeebtii koowaad ee ciyaarta halka Kooxda Watford oo marti aheyd dhankeeda aya sameesay hal jaanis oo gool loo maleesan karay.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaana ku soo idlaaday bar-baro gool la’aan, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid ka xiiso badan qeebtii hore.
The Blues ayaa ku soo gashay dar dar xoogan iyaga oona la yimid labo gool oo deg deg ah bilowgii hore ee qeebtii dambe ee ciyaarta.
Daqiiqadii 48-aad ee ciyaarta laacibka reer England ee Loftus-Cheek ayaa kooxdiisa u keenay goolka koowaad kaddib caawin uu ka helay Eden Hazard.
Waqti badan kama aysan soo wareegin markii uu Devid Luiz ciyaarta ka dhigay 2-0 waxaana goolkaas mar labaad caawiye ka noqday Eden Hazard, Watford waxaa la soo gudboinaaday cadaadis aad u daran.
Laacibka reer Argentina ee Higuain ayaa dhaliyey goolkii sedexaad ee ciyaarta daqiiqadii 75-aad kaddib caawin uu ka helay Pedro Rodriguez, natiijada kulan ciyaareedka ayaana noqatay 3-0.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Chelsea iyo Watford ayaa ku dhamaaday 3-0 xili Chelsea ay soo xaadirtay kaalinta sedexaad ee kala sareenta horyaalka Premier league.
Dhinaca kale kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Huddersfield iyo Manchester United ayaa ku soo dhamaaday bar-baro 1-1.
Qeebtii hore ee kulanka ayaa lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hor kaceyso Kooxda Manchester waxaana goolkaas u dhaliyey xidigooda da’da yar ee McTominay daqiiqadii 8-aad ee ciyaarta.
Kaddib markii dib la isagu soo laabtay qeebtii dambe ee ciyaarta Kooxda Huddersfield ayaa la timid goolka bareejada ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo Mbenza kaddib caawin uu ka helay goolhayohooda lagu magacaabo Lossl daqiiqadii 60-aad ee ciyaarta.